သတင်းများ – Welcome to Eden Centre
၂၀၁၉ ခုနှစ် ဧဒင်ရိပ်မြုံ၏ရန်ပုံငွေရှာဖွေခြင်း အစားအသောက်စျေးရောင်းပွဲကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ
(၁၅) ရက်နေ့ သောကြာနေ့ညနေ ၂ နာရီမှ ၅းဝ၀ နာရီအထိကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ဤစျေးရောင်ပွဲသည်ဧဒင်ရိပ် မြုံပရဟိတလုပ်ငန်းအတွက်ရန်ပုံငွေရှာဖွေပေူခြင်းသက်သက်အတွက်သာမဟုတ်ပါ။ ဝန်ထမ်းများ၊ မိဘများ နှင့် လုပ်အားပေးကြသည့်စေတနာရှင်များ အကြားရင်နှီးမှုတည်ဆောက်ပေးခြင်းလည်းဖြစ်ပါသည်။ ယခုနှစ် တွင် မနက်နှင့်ညနေပိုင်းလာကြသည့်မိဘများကလည်း တစ်တပ်တစ်အားပါဝင်စျေးရောင်းပေးခဲ့ကြပါသည်။ ထို့ပြင်စေတနာရှင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်သော ဥက္ကလာမေအရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းမှ (၁၁) ဦးကလည်းလာရောက် ကူညီစျေးရောင်းပေးခဲ့ကြပါသည်။ ယခုနှစ်တွင် ခါတိုင်းနှစ်များထက်ပိုပြီး ဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ယခုနှစ် တွင် စုစုပေါင်း ၃၅ သိန်းကျော် ဤစျေးရောင်းလွဲမှရန်ပုံငွေရှာဖွေနိုင်ခဲ့ပါသည်။
အစားအသောက်အမျိုးပေါင်းဆယ်မျိုးကျော်ရောင်းခဲ့ရပြီး ပါဝင်သောလူများအားလုံး စည်းလုံးညီညွှတ် စွာဖြင့် မိသားစုစိတ်ဓါတ်အပြည့်ဖြင့် လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ခြင်းပင်လျှင်အောင်မြင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
ဧဒင်မသန်စွမ်းသက်ငယ်များပြုစုရာရိပ်မြုံ၊ မန်နေးဂျင်းဒါရိုက်တာသည် မသန်စွမ်းသူများ၏ အခွင့်အရေးများ ဆိုင်ရာအမျိုးသားကော်မတီတွင် မသန်စွမ်းသူများကိုယ်စားလှယ်၊ စေတနာရှင်များအဖွဲ့ကိုယ်စား ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလမှစပြီးပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ယခုအခါ အသစ်ထပ်ဆင့်ဖွဲ့လိုက်သော ပညာရေးဆပ်ကော်မတီ တွင် ပြန်လည်တာဝန်ပေးခြင်းခံရပါသည်။
ဧဒင်မသန်စွမ်းသက်ငယ်များပြုစုရာရိပ်မြုံ၊ မန်နေးဂျင်းဒါရိုက်တာသည် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ယူပြီး အကောင်အထည်ဖေါ်နေသော မြန်မာနိုင်ငံပညာရေးအရည်အသွေးမြှင့်တင်သည့်အစီအစဉ်တွင် မသန်စွမ်း ကျွမ်းကျင်သူအဖြစ် ၂၀၁၇ ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းမှစပြီး အချိန်ပိုင်းတာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေပါသည်။
အီတလီ-မြန်မာမိတ်ဆွေများအသင်းမှ ဧဒင်ရိပ်မြုံဝန်ထမ်းများကို အီတလီသို့လာရောက်လည်ပတ်ပြီး မသန်စွမ်း လုပ်ငန်းများကိုလေ့လာရန် ဖိတ်ကြားလာခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကလေးမြို့မှ လက်ထောက်စီမံကိန်းဒါရိုက်တာ ဆရာယောစွ၊ ဟါးခါးမှ ချင်းစီဘီအာရ်စီမံချက်မန်နေဂျာဒေါ်ထလှေးဆုန်၊ ရန်ကုန်ဧဒင်ရိပ်မြုံမှ မန်နေးဂျင်းဒါရိုက် တာနှင့် အစီအစဉ်ညှိုနိုင်းရေးမှူးဒေါ်ငွန်ဒီးတို့လေးဦးတို့သည် ၂၀၁၉ ခုနှစ် မေလ (၁၇) ရက်နေ့မှ ဇွန်လ (၂) ရက် နေ့အထိ အီတလီနိုင်ငံပါးမားမြို့သို့သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့ကြပါသည်။
ဤခရီးစဉ်အတွင်း မသန်စွမ်းကလေးများမှအစ လူကြီးအထိ ပြုစုစောင့်ရှောက်၊ လုပ်ဆောင်ပေးနေသည့်လုပ်ငန်း များကို အသေးစိတ်လေ့လာခွင့်ရခဲ့ပါသည်။ ထို့ပြင် ပါးမားတက္ကသိုလ်တွင်လည်း (၅) ရက်တာ ညနေတိုင်း မသန် စွမ်းမှုနှင့်ပတ်သက်သောပညာရပ်များကို ကါမေက္ခဒမီးထရစ်နှင့်အဖွဲ့မှ သင်ပေးပြီး သင်တန်းတက်ရောက် ကြောင်းလက်မှတ်ပါထုတ်ပေးခဲ့ကြပါသည်။ ထိုခရီးစဉ်အတွင် ရောမမြို့ရှိ မြန်မာသံအမတ်ထံသွားရောက်လည် ပတ်ခြင်း၊ ရောမနှင့် ဗာတီကန်သို့လေ့လာရေးခရီးပို့ပေးခြင်းတို့ကိုစီစဉ်ပေးခဲ့ကြပါသည်။ မြန်မာကိုယ်စားလှယ် အဖြစ်သတ်မှတ်ဧည့်ခံပေးကြသောကြောင့် ဆက်ဆိုင်ရာဒေသတာဝန်ရှိသူများနှင့်လည်း စုံလင်စွာသွားရောက် နုတ်ဆက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။
ဤခရီးစဉ်ကိုတာဝန်ယူစီစဉ်ပေးသော အီတလီလွှတ်တော်အမတ်ဟောင်း Sinator Albertino နှင့်အဖွဲ့သားများ အား ဧဒင်ရိပ်မြုံမှ အထူးလှိုက်လှဲစွာကျေးဇူးဥပကာယတင်ရှိပါကြောင်း မှတ်တမ်းတင်ဖေါ်ပြအပ်ပါသည်။
ဤခရီးစဉ်သည် ဧဒင်ရိပ်မြုံအတွက်အလွန်ထူးခြားပြီး၊ အကျိုးရှိသောလေ့လာရေးခရီးစဉ်ဖြစ်ပါသည်။
 မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူတိုင်းအကျုံးဝင်ပညာရေးစီမံကိန်းကို ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော် အကောင်အထည်ဖေါ် လုပ်ဆောင်သည့် တစ်ခု တည်းသော မသန်စွမ်းအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည့် ဧဒင်ရိပ်မြုံအနေဖြင့် လူတိုင်းအ ကျုံးဝင်ပညာရေးစနစ်ကို မည်သို့လက်တွေ့အောင်မြင်စွာအကောင်အထည်ဖေါ်နေသည်ကို လေ့လာ ခွင့်ရခဲ့ပါသည်။ ဤခရီးစဉ်မှ လူတိုင်းအကျုံးဝင်ပညာရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး ပိုမိုတိကျ ရှင်းလင်းသော အယူအဆ လုပ်ဆောင်မှုများကို လက်တွေ့မြင်တွေ့သိရှိခြင်းအားဖြင့် ဧဒင်အနေဖြင့်ပိုမိုအားသွန်ခွန် စိုက်လုပ်ဆောင်ရန်ပိုမိုအားတက်လာပြီဖြစ်ပါသည်။
 ဤခရီးစဉ်အတွင်း မသန်စွမ်းမှုနှင့်လူတိုင်းအကျုံးဝင်ပညာရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး သင်ယူလေ့လာခွင့် ပါးမားတက္ကသိုလ်တွင် ပါမောက္ခဒမီးထရပ်အားဖြင့် သင်ယူခွင့်ရရှိခဲ့ပါသည်။ လက်မှတ်ရရှိလာခဲ့ပါသည်။
 ဤလေ့လာရေးခရီးစဉ်ကို အသေးစိတ်အစီစဉ်တစ်ကျပြင်ဆင်ပေးထားသည့်အတိုင်း အကျိုးရှိစွာလေ့ လာသင်ယူခဲ့ရပါသည်။ ထို့ပြင် မွေးကင်စကလေးများပြုစုသည့်နေရာမှစပြီး သက်ကြီးပြုစုသည့်နေရာအ ထိ၊ မသန်စွမ်းသူများ၏အဖွဲ့အစည်းများ၊ အခြားလေ့လာသင့်သည့်နေရာများသို့ စုံစုံလင်လင်သွား ရောက်လေ့လာခွင့်ရရှိခဲ့ကြပါသည်။ ပါမားမြို့၏ဘီရှော့ထံသို့လည်းသွားရောက်နုတ်ဆက်ခဲ့ပါသည်။
 မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်များအနေဖြင့်သွားရောက်လေ့လာခဲ့သည့်ခရီးစဉ်ဖြစ်သောကြောင့် ခရီးစဉ်အ တွင်း အီတလီဆိုင်ရာမြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးရဲနောင်ထံသို့သွားရောက်နုတ်ဆက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။
 အီတလီနိုင်ငံသည် မသန်စွမ်းသူများအမှန်တကယ်အကျုံးဝင်မှုအဆင့်အထိ ရောက်နေပြီဖြစ်သော ကြောင့် ထို့အပြင်လူတိုင်း အကျုံးဝင်ပညာရေးကိုလည်း နှစ်ပေါင်း (၃၀) ကျော်အထိအောင်မြင်စွာ အကောင်အထည်ဖေါ်နေပြီဖြစ် သည့်အနေအထားကို သွားရောက်လေ့လာနိုင်ခဲ့သည်မှာ ဧဒင်ရိပ်မြုံ အတွက်အမှန်တကယ်အခွင့်အရေး ဖြစ်နေပါသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် ဧဒင်ရိပ်မြုံအနေဖြင့် လူတိုင်း အကျုံးဝင်ပညာရေးနှင့် မသန်စွမ်းမှုအ ကျုံးဝင်လာရေးတို့တွင် ပိုမိုရှင်းလင်း တက်ကြွစွာဖြင့် လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် ခွန်အားသစ်ရရှိပါသည်။
 ခရီးစဉ်အတွင်း ဗီးနစ်၊ မီလန်၊ ရောမနှင့် ဗာတီကန်တို့ကိုလည်း သွားရောက်လည်ပတ်နိုင်ရန်စီစဉ်ပေး ထားကြသောကြောင့် မသန်စွမ်းမှုများအပြင် အခြားဗဟုသုတများလည်း များစွာရရှိ လေ့လာခွင့်ရရှိခဲ့ပါ သည်။ အီတလီခရီးစဉ်အတွင်း လေ့လာရေးဗီးနစ်သို့သွားရောက်ခဲ့
အီတလီနိုင်ငံ၊ ပါးမားတက္ကသိုလ်၊ Special Pedagogy ဌာနမှူး၊ ပါမောက္ခ Dr. Dimitris Argiropoulos အား အမှတ်တရလက်ဆောင်ပေးအပ်စဉ်
ဧဒင်ရိပ်မြုံသို့ Andrea and Senator Soliani Albertina လာရောက်စဉ်
ကျွန်တော်တို့သည် အီတလီတွင်လေ့လာ သင်ယူခဲ့တဲ့အရာများကို မြန်မာပြည်တွင် ပြန်လည်စေမျှရန် အလွန်စိတ်အားထက် သန်နေကြပါသည်။ ဤခရီးစဉ်သည် အ နာဂတ်တွင် အီတလီနှင့်မြန်မာချစ်ကြည် ရေးကို တိုးတက်စေမည်ဟုယုံကြည်ပါ သည်။ လေ့လာရေးခရီးစဉ်အတွင်း ဧည့် ဝန်ကျေပြွန်စွာ အမြဲပြုစုပေးကြပါသော မိတ်ဆွေများအားလုံးကို အထူးကျေးဇူး တင်ရှိပါကြောင်း မှတ်တမ်းတင်ဖေါ်ပြအပ် ပါသည်။
India နိုင်ငံ AMALTAS အဖွဲ့မှဦးဆောင်ပြီး နီပေါနိုင်ငံမြို့တော် ကပ်မန်ဒူတွင် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇွန်လ (၂၅) ရက်မှ (၂၆) ရက်အထိပြုလုပ်ခဲ့သည့် Multi-Country Expert Group meeting (M-CEG) on “Reviewing Intellectual and Developmental Disability Programmes in South Asia” အစည်းအဝေးတွင် မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားလှယ် အဖြစ်ဖိတ်ခေါ်ခြင်းခံခဲ့ရသောကြောင့် ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ ထိုအစည်းအဝေးသို့ တောင်အာရှ (၅) နိုင်ငံ နီပေါ၊ အန္တိယ၊ ပါကစ္စတန်၊ ဘင်းကလားဒေ့စ်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံတို့မှကိုယ်စားလှယ်များတက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
ဤအစည်းအဝေး၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ တောင်အာရှနိုင်ငံများကပြဌာန်းထားသော မသန်စွမ်းဆိုင်ရာဥပဒေ များ၊ မူဝါဒများ၊ ပြဌာန်းချက်များနှင့်လမ်းညွှန်ချက်များတွင် ဉာဏ်ရည်မသန်စွမ်းသူများအတွက် မည်သည့်အ တိုင်းအတာအထိ တိတိကျကျ၊ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖေါ်ပြပါရှိနေမှုကိုလေ့လာပြီး ရရှိလာသည့်အချက်အလက် များကို အစီရင်ခံစာရေးသားကာ အလှူရှင်များနှင့် သက်ဆိုင်ရာတောင်အာရှနိုင်ငံအစိုးရများထံ တင်ပြမည်ဖြစ်ပါ သည်။ ထိုမှတဆင့် ထိုဉာဏ်ရည်မသန်စွမ်းသူများအတွက် အရေးဆိုခြင်း၊ အဆိုပြုလွှာရေးသားတင်သွင်ခြင်း များအတွက် အသုံးဝင်လာမည်ဖြစ်ပါသည်။ ပါဝင်တက်ရောက်လာကြသော တောင် အာရှ (၅) နိုင်ငံမှ ကိုယ်စားလှယ်များ။
Dr. Suneeta Singh, Country Expert,AMALTAS, India; Mr. Ram Krishna Thapa, Karuna Foundation – Nepal; Dr. Shevta Kalyanwala, India (AMALTAS); Mr. Iqbal Munawawar, Country Expert, India (AMALTAS); Mr. Shafiq ur Rehman, Milestone, Pakistan; Mr. Deepak Raj Sapkota, Karuna Foundation, Nepal; Mr. Shafiqur Rehman, Bangladesh and Mr. Tha Uke, Eden Centre for Disabled Children, Myanmar. အုပ်စုလိုက်ဆွေးနွေးနေကြစဉ်
သြစတေးလျနိုင်ငံသို့ ပညာရေးဌာနမှ အဆင့်မြင့်အရာရှိများနှင့်အတူ My-EQIP အစီအစဉ်ဖြင့် လေ့လာရေးခရီး သွားရောက်ခြင်း။
My-EQIP အစီအစဉ်ဖြင့် ပညာရေးဌာနမှအဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများနှင့်အတူ လေ့လာရေးခရီးသွားရန်ဦးထာအုပ် အားရွှေးချယ်ခံထားရသောကြောင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇွန်လ (၉) ရက်နေ့မှ (၁၆) ရက်နေ့အထိ သြစတေးလျနိုင်ငံ၊ မဲလ်ဘုန်းမြို့တွင် “Professional Learning through Participation in the Leadership for Inclusive Development Research for Development Impact (RDI) Conference 2019” တက်ရောက်ခြင်းနှင့် ဗစ်တိုးရီး ယားပြည်နယ်ရှိ ပညာရေးနှင့်သက်ဆိုင်သော လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများကို လေ့လာခွင့်ရရှိခဲ့ပါသည်။ ထိုခရီး စဉ်တွင် သံရုံးမှဝန်ထမ်းများလည်းပူးပေါင်းပါဝင်ပေးခဲ့ကြပါသည်။
ဧဒင်ရိပ်မြုံအနေဖြင့် ဤအခွင့်အရေးကို မသန်စွမ်းသူများ၏ပညာသင်ယူခွင့်နှင့် လူမှုဘဝတွင်ပိုမိုအကျုံးဝင် လာနိုင်မှုတို့အတွက်ဆက်လက်လုပ် ဆောင်ပေးရန်အတွေးအမြင်သစ်ပေးသည့်ခရီးစဉ်ဖြစ်ပါသည်။ ဤသို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို ဧဒင်ရိပ်မြုံအနေဖြင့် အလွန်အလေးထားပါသည်။ ပညာရေးဌာနမှ အဆင့်မြင့်အရာ ရှိများနှင့် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုသည် လက်ရှိပညာရေးဌာနတွင်လုပ်ဆောင်နေသော လူမှုအကျုံးဝင်ခြင်းအစီအစဉ် အတွက်သော်လည်းကောင်း၊ ဧဒင်ရိပ်မြုံအနာဂတ် မသန်စွမ်းသူများနှင့်ပတ်သက်သောလုပ်ငန်းများအတွက် များစွာအကျိုးပြုမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဦးထာအုပ်၊ မသန်စွမ်းကျွမ်းကျင်၊ My-EQIP၊ ဦးကိုလေးဝင်း၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချူပ်၊ အခြေခံပညာရေးဦးစီးဌာန၊ ဦးအေးမြင့်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချူပ်၊ သက်မွေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန၊ ဦးသိန်းဝင်း၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချူပ်၊ အဆင့်မြင့်ပညာရေးဦးစီးဌာန၊ ဦးဇော်ဝင်း၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချူပ်၊ ကျောင်းပြင်ပပညာရေးဦးစီးဌာန၊ ဒေါ်အေးအေးမွန်ဦး၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ သုတေသန၊ လေ့ကျင့်နေရးနှင့် စီမံကိန်းဦးစီးဌာန၊
သြစတေးလျှနိုင်ငံ၊ မဲလ်ဘုန်းမြို့တွင် ထရမ်းစီပြီးလေ့လာရေးသွားနေပုံ။
ဂျပန်နိုင်ငံမှ ခရစ်ယာန်အသင်းတော်နှင့် ပညာရပ်ဖလှယ်ခြင်း။
ဂျပန်နိုင်ငံရှိ Japan Church World Service (JCSW) အသင်းတော်မှ ဧဒင်ရိပ်မြုံဝန်ထမ်းတစ်ဦးလာရောက် လည်ပတ်ပြီး သူတို့လုပ်ဆောင်နေသောမသန်စွမ်းလုပ်ငန်းများကို အာဂါပေစင်တာတွင်လာရောက် လေ့လာ ရန်ဖိတ်ကြားချက်အရ ဧဒင်ရိပ်မြုံမှ အစီအစဉ်ညှိုနိုင်းရေးမှူးဒေါ်ငွန်ဒီးအား ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ (၂၉) ရက်နေ့ မှ သြဂုတ်လ (၁၆) ရက်နေ့အထိ (၃) ပတ်ကြာသွားရောက်လေ့လာခဲ့ပါသည်။ ဤခရီးစဉ်အတွက် ဖတ်ခေါ်သူမှ ကုန်ကျစရိတ်အားလုံးကျခံပေးထားပါသည်။ ဧဒင်ရိပ်မြုံ၏အမှန်တကယ်လိုအပ်နေသောအချက်ဖြစ်သော ကြောင့် လေ့လာတွေ့ရှိ သင်ယူရရှိသည့်အရာများကို မြန်မာပြည်တွင်ပြန်လည်အသုံချနိုင်မည်ဟုယုံကြည်ပါ သည်။ ဤအခွင့်အရေးကို ပြင်ဆင်ပေးထားသော ဂျပန်နိုင်ငံမှ ယုံကြည်သူဓမ္မညီအစ်ကိုများကို အထူးကျေးဇူး တင်ကြောင်း မှတ်တမ်းတင်ဖေါ်ပြအပ်ပါသည်။ ကြိုဆိုသူမိတ်ဆွေများနှင့် အာဂါပေရိပ်သာသို့ ချောမောစွာရောက်ရှိခြင်း။
ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံ ချွန်ဟွာခရစ်ယာန်ဆေးရုံတွင် ပညာသင်ကြားခြင်း
ဧဒင်ရိပ်မြုံနှင့် မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သော EDEN Social Welfare Foundation တို့အကြားသဘော တူချူပ်ဆိုထားသောစာချူပ်အရ ဧဒင်ရိပ်မြုံမှ ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်း အကြောအဆစ်ကျွမ်းကျင်သူဝန်ထမ်းများ သည် ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံရှိ ချွန်ဟွာဆေးရုံတွင် ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး တစ်လကြာပညာစည်းပူးသင်ကြားခွင့်ကို ရရှိခဲ့ကြပါသည်။ ပထမအသုတ်အဖြစ် အကြောအဆစ်ကျွမ်းကျင်သူဆရာမနှစ်ဦး ဆရာမနော်ဇာနည်ဆောင်၊ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးမန်နေဂျာနှင့် ဆရာမအေးသီတာလှိုင်တို့သည် ၂၀၁၉ ခုနှစ် မတ်လ (၄) ရက်နေ့မှ မတ် လ (၂၉) ရက်နေ့အထိ (၄) ပတ်ကြာသွားရောက်ခဲ့ကြပါသည်။ ဒုတိယအသုတ်အဖြစ် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇွန်လ (၄) ရက်နေ့မှ ဇွန်လ (၂၉) ရက်နေ့အထိ ဆရာမနောိအယ်ဇာထူးနှင့် ဆရာမဒေါ်ယုယနိုင်တို့လည်း (၄) ပတ်ကြာ သွားရောက်ပညာသင်ကြားခဲ့ကြပါသည်။ ပညာသွားရောက်သင်ကြားသောဧဒင်ဝန်ထမ်း (၄) ဦးစလုံး အကြော အဆစိကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်ကြသော်လည်း (၄) ပတ်ကြာသွားရောက်သင်ကြားခဲ့သည့်ဘာသာရပ်နှင့် ကဏ္ဍများ မတူညီကြပါ။ ဆရာမနော်ဇာနည်ဆောင်မှ Sensory Integration သွားသင်ခဲ့ပြီး ဆရာမအေးသီတာလှိုင်မှ Splint Making ဘာသာရပ်ကိုသွားရောက်သင်ကြားခဲ့ကြပါသည်။ ဆရာဆနော်အယ်ဇာထူးနှင့်ဆရာမယုယနိုင် တို့မှ general physiotherapy intervention especially pediatric physiotherapy ဘာသာရပ်တို့ကိုသင်ယူခဲ့ကြ ပါသည်။
ဧဒင်ရိပ်မြုံအနေဖြင့်ကျွမ်းကျင်မှုများကိုပံ့ပိုးသူများအား အထူးကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ဧဓင်ရိပ်မြုံသည် ငွေကြေးနှင့် ပစ္စည်းများအပြင် ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာနည်းပညာများကိုဖြန့်ဖြူးပေးမည့်သူများကိုလည်း အထူးလိုအပ်လျက်ရှိပါ သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် မသန်စွမ်းနှင့်ပတ်သက်သောကျွမ်းကျင်မှုပညာရပ်အများစုသည် မြန်မာနိုင်ငံ တွင်သင်ယူမည့်နေရာ၊ သင်ကြားပေးနိုင်သောသူများမရှိကြပေ။ မသန်စွမ်းကလေးများအား အရည်အသွေးရှိ သောဝန်ဆောင်မှုများ အမြဲပေးဆောင်နိုင်ရန်အတွက် နည်းပညာများကို အမြဲလေ့လာသင်ယူနိုင်ရန် အထူးလို အပ်လျက်ရှိပါသည်။ ဤကဏ္ဍကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မည့် အလှူရှင်များကိုလည်း ဧဓင်ရိပ်မြုံမှ အမြဲတမ်း လက်ကမ်းကြိုဆိုနေပါသည်။ Yu Ya Naing and Eh Zar Htoo with certificate (ဆရာမယုယနိုင်နှင့် ဆရာမနော်အယ်ဇာထူး) ဆရာမယုယနိုင်နှင့် ဆရာမနော်အယ်ဇာထူး
ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံ၊ ချွမ်ဟွာဆေးရုံမှ ဆေးဖက်ပညာရှင်များအဖွဲ့လိုက်လာရောက်ကူညီ ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း။
ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံ၊ ချွမ်ဟွာဆေးရုံမှ ဆေးဖက်ပညာရှင် (၉) ယောက်ပါသော အဖွဲကတစ်ဖွဲ့သည် ၂၀၁၉ ခုနှစ် သြ ဂုတ်လ (၁၉) ရက်နေ့နှင့် (၂၀) ရက်နေ့တို့တွင် ဧဒင်ရိပ်မြုံ သို့လာရောက်ပြီး မသန်စွမ်းကလေးများ၊ မိဘများ၊ ဧည့်သည်နှင့် ဧဒင်ရိပ်မြုံဝန်ထမ်းများ စုစုပေါင်း အယောက် (၃၀၀) ခန့်အား အခမဲ့စမ်းသပ်ပေးခြင်း၊ ဆေးဝါးများ ကုသပေးခြင်းစသည်တို့ကို ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြပါသည်။ ဤသို့ စေတနာရှင်များဧဒင်ရိပ်မြုံသို့လာရောက်လည် ပတ်ပြီး အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းသည် တတိယအကြိမ်းဖြစ်ပါသည်။
ပထမနေ့တွင် မသန်စွမ်းကလေးများကိုဝန်ဆောင်မှုပေးနေသော အကြောအဆစ်ကျွမ်းကျင်သူများ၊ အခြားကျွမ်း ကျင်သူ (၂၅) ဦးတို့အား ဆေးပညာရှင်များအဖွဲ့တွင်ပါလာကြသော Dr. Liao, Su-Fen, Doctor of Physical Medicine and Rehabilitation နှင့် Ms. Alice @ Yu, Nien-Hsin, Occupatinal Therapist တို့မှ မသန်စွမ်းမှု နှင့်လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်နည်းများကို တစ်ရက်တာသင်တန်းပေးခဲ့ကြပါသည်။ ဤသင်တန်းကို ဧဒင်ရိပ်မြုံမှ ကျွမ်း ကျင်ဝန်ထမ်းများသာမက အခြားဆေးရုံနှင့် ကလေးပြုစုရေးစင်တာများမှ ကျွမ်းကျင်သူများလည်း လာရောက် တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
ဧဒင်ရိပ်မြုံအနေဖြင့် ဤကဲ့သို့ မိမိတို့ထံအရောက်လာပေူသည်သာမက မြန်မာပြည်တွင်သင်လို့မရနိုင်သည့် ပညာရပ်များ၊ ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာနည်းပညာအစသ်များကို လာရောက်သင်ပေးကြသောမိတ်ဆွေများကို အထူး ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း မှတ်တမ်းတင်ဂုဏ်ပြုဖေါ်ပြအပ်ပါသည်။
ဧဒင်ရိပ်မြုံတွင် မသန်စွမ်းကလေးငယ်များအား ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံ ချုံဟွာဆေးရုံမှဆရာဝန်များက ဆေးကုသပေးနေစဉ်။
ဒေါက်တာစူဖဲန်မှ ပြန်လည်ထးထောင်ရေးဝန်ထမ်းများအား သင်တန်းပေးနေစဉ်။
ချုံဟွာဆေးရုံမှ အိုတီဆရာမက မသန်စွမ်းကလေးတစ်ယောက်အတွက် စပလင့်ပြုလုပ်ပေးနေစဉ်
ဧဒင်ရပ်မြုံတွင် အကြောအဆစ်ကျွမ်းကျင်သူဝန်ထမ်းအစသ် (၂) ဦးအလုပ်ခန့်ထားခြင်း။
ဧဒင်ရိပ်မြုံအနေဖြင့် အသစ်ရောက်ရှိလာသော အကြောအဆစ်ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်း (၂) ဦးတို့ကို လှိုက်လှဲစွာ ကြိုဆိုကြပါသည်။
ဆရာမသည် ၂၀၁၄-၁၅ ပညာသင်နှစ်တွင် ဆေးဖက်ပညာသည်တက္ကသိုလ်မှ (ခန္ဒာဗေဒ) ဘာသာ ရပ်ဖြင့် ဘွဲ့ရရှိသူတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလမှစပြီး ဧဒင်ရိပ်မြုံ၊ စီအီးဌာနတွင် အကြော အဆစ်ကျွမ်းကျင်သူဝန်ထမ်းတစ်ဦးအနေဖြင့် အလုပ်စတင်ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နေပါသည်။
ဆရာမသည် ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် ဆေးဖက်ပညာသည်တက္ကသိုလ်မှ B. Med. Tech (Physiotherapy) ဘွဲ့ရရှိသူတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ ဘွဲ့ရပြီးပြင်ပဆေးရုံတွင် စတင်အလုပ်ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ခဲပါသည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ် တွင်တရုပ်ပြည်အစိုးရပေးသောပညာသင်ဆုရရှိခဲ့သောကြောင့် ကွန်ယီပြည်နယ်၊ နန်နိန်းမြို့ရှိ ကွန်ယီဆေး တက္ကသိုလ်တွင် အကြောအဆစ်နှင့်ပတ်သက်သောဘာသာရပ်ကို မဟာဘွဲ့အတွက်စတင်လေ့လာသင်ယူခဲ့ ပါသည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇွန်လတွင် M.Sc. (Rehabilitation Medicine and Physiotherapy) ဘွဲ့ရရှိလာခဲ့ပါသည်။
ဆရာမအနေဖြင့် ဧဒင်မသန်စွမ်းသက်ငယ်များပြုစုရာရိပ်မြုံတွင် ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလလယ်မှ စပြီးအလုပ်စတင်ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။ လက်ရှိတွင် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဌာနတွင် အခြားအကြော အဆစ်ကမမ်းကျင်သူဆရာမ (၃) ယောက်နှင့်အတူ မသန်စွမ်းကလေးများကို ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဝန်ဆောင် မှုပေးနေပါသည်။
ရန်ကုန်မြို့ရှိ ပြင်သစ်သံရုံးမှ ငွေကြေးပံ့ပိုးပေးမှုဖြင့် အကောင်အထည်ဖေါ်နေသည့် “Make the rights of PWDs real through self-advocacy of PWDs” တစ်နှစ်သက်တမ်းရှိစီမံချက်အသစ်မိတ်ဆက်ခြင်း အခန်းအ နားကို ကလေးမြို့၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတွင် ၂၀၁၉ ခုနှစ် သြဂုတ်လ (၈) ရက်နေ့တွင်လည်းကောင်း၊ ထား ဝယ်မြို့ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတွင် စက်တင်ဘာလ (၁၅) ရက်နေ့တွင်လည်းကောင်း ကျင်းပပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါ သည်။ ဤစီမံကိန်းကို ကလေးမြို့၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးနှင့် ထားဝယ်မြိုနယ်၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့ တွင် အကောင်အထည်ဖေါ်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ စီမံချက်၏အဓိကရည်မှန်းချက်မှာ ဦးတည်ဒေသရှိမသန်စွမ်းသူ များသည် မိမိတို့လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွင် တက်ကြွစွာပါသင်ခြင်းဖြင့်အခွင့်အရေး တန်းတူရရှိသောသူများဖြစ်လာ ရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။ မသန်စွမ်းသူများမှ ကိုယ်တိုင်အရေးဆိုလာခြင်းဖြင့် ဒေသ ခံလွှတ်တော်အမတ်များ၊ အစိုးရ အရာရှိများနှင့် အခြားအကျုံးဝင်သက်ဆိုင်သူများမှ မသန်စွမ်းဥပဒေနှင့် မူဝါဒ များတွင်ဖေါ်ပြထားသော မသန်စွမ်းသူများ၏အခွင့်အရေးအတွက် ပူးပေါင်းပါဝင်လုပ်ဆောင်လာကြမည်ဟု မျော်လင့်ပါသည်။
ဧဒင်ရိပ်မြုံသည် မသန်စွမ်းသူများ၏အရေးကိစ္စကိုအမြဲဦးစားပေးဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့် မသန်စွမ်းမှုနှင့်ပတ်သက်သောဥပဒေများ၊ မူဝါဒများပိုမိုခိုင်မာတိကျလာရန်အမြဲကြိုးစားနေပါသည်။ မသန်စွမ်း ဥပဒေများအသက်ဝင်လာ၊ ဥပဒေစိုးမိုးလာပါက မသန်စွမ်းသူများလည်းစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တက်လာပြီး မိမိတို့ ၏အရေးကိစ္စများအတွက် မိမိတို့ကိုယ်တိုင်အရေးဆို၊ တောင်းဆိုလာကြမည်ဖြစ်ကာ မသန်စွမ်းသူများအကျုံး ဝင်သည့် လူအသိုက်အဝန်းဖြစ်လာမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဧဒင်ရိပ်မြုံသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်အစတွင် တရုပ်နိုင်ငံ၊ နန်နိန်းမြို့တွင် သွားရောက်ပြီး စီအီးနည်းပညာကို မိတ်ဖက် အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သော Silver Lining Foundation (SLF) သို့သွား ရောက်လေ့လာသင်ယူခွင့်ရခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့လေ့လာပြီးနောက် ဧဒင်ရိပ်မြုံတွင် စီအီးဝန်ဆောင်မှုကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် စတင်လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ပထမနှစ်တွင် သူငယ်နာအကြောတင်းမသန်စွမ်းကလေး (၁၂) ဦး ကို အခန်း (၂) ခန်းဖွဲ့ပြီး လုပ်ဆောင်ပေး နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ဒုတိယနှစ်တွင် မသန်စွမ်းကလေး အယောက် (၂၀) ဦးအား စာသင်ခန်း (၂) ခန်းတွင် ဆက်လက် ပြီးစီအီးနည်းပညာဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါသည်။ စီအီးနည်းပညာကို ဧဒင်ရိပ်မြုံတွင်စတင်သုံးစွဲကတည်းက တရုပ်ပြည်မှ မိတ်ဖက်အဖွဲ့ကသော်လည်းကောင်း၊ ဟောင်ကောင်ရှိပါမောက္ခဒေါက်တာချိမ့်ကသော်လည်း ကောင်း စဉ်ဆက်မပြတ် အနီးကပ်ဆက်လက်သင်ကြားပေးခဲ့ကြပါသည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်ဆွေရာသီ ဧပြီလ ကျောင်းပိတ်သည့်ကာလတွင်လည်း ဧဒင်စီအီးဝန်ထမ်းများ နန်နိန်းသို့တစ်ပတ်ကြာပြန်လည်သွားရောက်ပြီး နည်းပညာဆက်လက်သင်ယူခဲ့ကြပါသည်။ နိုင်ငံခြားမှကျွမ်းကျင်သူများကလည်း ပုံမှန်လာရောက်ပြီး စာတွေ့ လက်တွေ့ဆက်လက်သင်ပေးနေကြပါသည်။
ဧဒင်ရိပ်မြုံအနေဖြင့်အနာဂတ်တွင် ဤစီအီးနည်းပညာသစ်ကို မြန်မာပြည်တွင်ပြန်လည်ဖြန့်ဝေပေးနိုင် မည်ဟုမျော်လင့်မိပါသည်။ ထိုသို့နည်းပညာဖြန့်ဖြူးပေးခြင်းအားဖြင့် မသန်စွမ်းကလေးများစွာအကျိုးခံစားလာ နိုင်ကြမည်ဟုယုံကြည်ပါသည်။
ဧဒင်ရိပ်မြုံ၊ ဟါးခါးရုံးခွဲ၏ (၂) အဆောင်သစ်ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် မေလ (၈) ရက်နေ့တွင် ချင်းပြည်နယ် လူမှုဝန်ကြီး ဦးပေါ်လွန်းမင်ထန်မှ ဖဲကြိုးဖြတ်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါသည်။ ထိုအဆောက်အအုံသစ်ဖွင့်ပွဲတွင် ချင်း ပြည်နယ်ဥပဒေချူပ်ဦးဆန်နီထန်ကျုံး၊ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဦးဗွေကော၊ ရပ်မိရပ်ဖများ၊ မသန်စွမ်းသူ များ၊ ဟါးခါးမသန်စွမ်းကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးအဖွဲ့ဝင်များတက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။ ဤအဆောက်အဦးကို မိတ်ဆွေဦးထောင်ကီယန်းမှ ကူညီပြီးဆောက်ပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အဆောက်အဦးအတွက်အလှူရ သည့်အခါ ပြန်လည်ပေးဆပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဤနှစ်ထပ်အဆောက်အဦး၏အောက်ထပ်တွင် မသန်စွမ်းကလေးများအားဝန်ဆောင်မှုပေးရန်အသုံးပြု မည်ဖြစ်ပြီး အပေါ်ထပ်တွင် ဧဒင်ရိပ်မြုံစီမံကိန်းဝန်ထမ်းများအတွက် ရုံးခန်းအဖြစ်အသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ အနာဂန်တွင် မသန်စွမ်းသူများအတွက် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းအတွက် သင်တန်းကျောင်းများ၊ မူကြို ကလေးများအတွက် အကျုံးဝင်မူကြိုကျောင်းများ၊ သင်တန်းဆောင်များ၊ အားကစားကွင်းနှင့် ပန်းခြံများလည်း ပြုလုပ်သွားရန်အစီအစဉ်ရှိပါသည်။ ဤသို့မသန်စွမ်းမှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ တစ်ခုပြီးတစ်ခုလုပ်ဆောင်သွားနိုင် ရန်အတွက် ဧဒင်ရိပ်မြုံအနေဖြင့် အထွေထွေအုပ်ချူပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ရပ်မိရပ်ဖ များနှင့် အခြားအကျုံးဝင်သက်ဆိုင်သူများနှင့် အတူလက်ဆွဲဆောင်ရွက်သွားနိုင်ရန် အမြဲကြိုးပမ်းသွားမည်ဖြစ်ပါ သည်။ ထိုမှတဆင့် ချင်းလူမှုအဖွဲ့အစည်းသည် မသန်စွမ်းသူများအကျုံးဝင်သောလူမှုအသိုက်အဝန်းဖြစ်လာရန် ရည်ရွယ်ထားပါသည်။
ဧဒင်ရိပ်မြုံ၊ ဟါးခါးမြို့၊ ချင်းပြည်နယ်တွင် အသစ်ဆောက်လုပ်ထားသော ရုံးအဆောက်အဦးသစ်ဖွင့်ပွဲ
ချင်းပြည်နယ်အစိုးရ၊ လူမှုရေးဝန်ကြီး၊ ဦးပေါ်လွန်းမင်ထန်မှ အဖွင့်မိန့်ခွန်းပြောကြားနေပုံ။ (၂၀၁၉ ခုနှစ် မေလ (၁၁) ရက်နေ့)
၂၀၁၉ ခုနှစ် မေလ (၁၁) ရက်နေ့တွင် ချင်းပြည်နယ်အစိုးရ၊ လူမှုရေးဝန်ကြီး၊ ဦးပေါ်လွန်းမင်ထန်၊ စီပွားရေးနှင့်စီမံကိန်းဝန်ကြီး၊ ဦးဝေကောတို့မှ ဧဒင်ရိပ်မြုံအဆောက်အဦးသစ်ကို ဖဲကြိုးဖြတ်ဖွင့်ပေးနေစဉ်။
ပင်မကျောင်းတွင်ပညာသင်ကြားနေသော မသန်စွမ်းကလေးများအား ဧဒင်ရိပ်မြုံမှတဆင့် အစိုးရမှ ထောက်ပံ့ကြေးပေးခြင်း။
၂၀၁၉-၂၀ ပညာသင်နှစ်တွင် ပင်မကျောင်းတွင်ပညာသင်ကြားနေသော မသန်စွမ်းကလေး စုစုပေါင်း (၃၃၉) ဦးအား ဧဒင်ရိပ်မြုံမှတဆင့် ထောက်ပံ့ကြေးပေးရန်အတွက် အခြေံပညာရေးဦးစီးဌာန၊ ပညာရေးဝန်ကြီး ဌာနမှ တာဝန်ပေးအပ်လာပါသည်။ ဤမသန်စွမ်းကလေးများအားယခင်နှစ်များက အခြေခံပညာရေးဦးစီးဌာန က တိုက်ရိုက်ထောက်ပံ့ကြေးပေးခဲ့သော်လည်း ယခုအခါဧဓင်ရိပ်မြုံမှ ထိုထောက်ပံ့ကြေးရရှိနိုင်ရန် စာရင်းပေး ထားသောမသန်စွမ်းကလေးများအားလုံး ဧဒင်မှတဆင့်ထောက်ပံ့ကြေးပေးရန် တာဝန်ပေးလာခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤမသန်စွမ်းကလေးများသည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှ (၂၃၂) ဦး၊ စစ်ကိုင်းတိုင်ဒေသကြီး၊ ကလေးမြို့နယ်မှ (၂၄) ဦးနှင့် ချင်းပြည်နယ် ဟါးခါးမြိုနယ်မှ (၅၃) ဦးနှင့် ထန်တလန်မြို့နယ်များမှ (၃၀) ဦးတို့ပါဝင်ပါသည်။ ထောက်ပံ့ကြေးရရှိမှုမှာ မူလတန်းကောျင်းသားများမှ တစ်လလျှင် ၅၀၀၀/- ကျပ်နုန်း၊ အလယ်တန်းကျောင်း သားတစ်ဦးလျှင် တစ်လ ၈၀၀၀/- ကျပ်နုန်းနှင့် အထက်တန်းကျောင်းသားများမှ တစ်လလျှင် ၁၀၀၀၀/- ကျပ် နုန်းဖြင့် တစ်နှစ်အတွက် (၁၀) လစာ ရရှိသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဤသိုမသန်စွမ်းကျောင်းသားများအား အခြေခံပညာရေးဦးစီးဌာနက ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးပေး လာနိုင်ခြင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံပညာရေးလောကတွင် လူတိုင်းအကျုံးဝင်ပညာရေးစနစ်ကို စတင်ကျင့်သုံးနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း သက်သေတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပေး (၂၀၁၅)၊ အမျိုးသား ပညာရေးမဟာဗျူဟာစီမံချက် (၂၀၁၆-၂၀၂၁) များကို စတင်အကောင်အထည်ဖေါ်လာခြင်းလည်းမည်ပါသည်။ သို့သော်ဤလုပ်ဆောင်ချက်သည် အစသာဖြစ်သောကြောင့် ဆက်လက်ပြီးအကောင်အထည်ဖေါ်ရမည့်အချက် များ ဥပမာ-ဆရာများအား မသန်စွမ်းမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးသင်တန်းများပေးရန်၊ လက်လှမ်းမှသောရုပ်ပတ်ဝန်းကျင် ဖန်တီးပေးရန် အစရှိသည်တို့ကိုလည်း စတင်ဆောင်ရွက်သွားရန်လိုနေပါသေးသည်။
တစ်နည်းအားဖြင့် လူတိုင်းအကျုံးဝင်ပညာရေးစနစ်ကို စတင်အကောင်အထည်ဖေါ်ရန် နိုင်ငံရေးအရ လိုလားမှုရှိလာပြီဖြစ်ကြောင်း၊ ယခင်ကထက်တိုးတက်လာပြီဖြစ်ကြောင်းပြောလို့ရမည်ထင်ပါသည်။
ဒုတိယအကြိမ် အမျိုးသားအဆင့် ဉာဏ်ရည်မသန်စွမ်းသူများအတွက်ပညာရေးညီလာခံကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ (၁၇) ရက်နေ့တွင် နေပြည်တော်တွင် အောင်မြင်စွာကျင်းပပြီးစီးခြင်း။
ဧဒင်သန်စွမ်းကလေးများပြုစုရာရိပ်မြုံမှ စတင်တည်ထောင်သူအဖြစ် ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် ဝင်ဖွဲ့စည်းခဲ့
သည့် မြန်မာနိုင်ငံအထူးပညာရေးအသင်းမှဦးစီးပြီး ဒုတိယသမ္မတတက်ရောက်ခဲ့သော ဒုတိယအကြိမ် အမျိုး သားအဆင့် ဉာဏ်ရည်မသန်စွမ်းသူများအတွက်ပညာရေးညီလာခံကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ (၁၇) ရက် နေ့တွင်MICC-2 နေပြည်တော်တွင် အောင်မြင်စွာကျင်းပပြီးစီးခဲ့ပါသည်။ ဤပညာရေးညီလာခံတွင် လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်း မြတ်အေး၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးသိမ်းကြီးနှင့် မြန်မာနိုင်ငံအထူးပညာရေး အသင်းဥက္ကဌ ဦးထာအုပ်တို့မှ မိန့်ခွန်းပြောကြားကြပါသည်။ ဤညီလာခံသို့ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန် ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့် အလုပ်သမားနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတို့ လည်းတက်ရောက်ချီးမြင့်ခဲ့ကြပါသည်။ ထိုနေပြည်တော်ညီလာခံတွင် ဝန်ကြီးဌာနလေးပါးမှအရာရှိများ၊ သံရုံးများမှတာဝန် ရှိသူများ၊ ကုလသမဂနှင့် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ မသန်စွမ်း ကျောင်းနှင့်အဖွဲ့အစီးသီး မှကိုယ်စားလှယ်များ စုစုပေါင်း (၄၀၀) ဦးခန့်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
အကြိုပညာပေးဆွေနွေးပွဲကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ (၁၅) ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့၊ မြောက်ဥက္ကလာရှိ ဂန္တမာဟိုးစေးလ်တွင် ကျင်းပခဲ့ရာ အယောက် (၂၀၀) ခန့်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။ ထိုပညာပေးဆွေးနွေးပွဲ တွင် ယူကေနိုင်ငံမှ ဒေါက်တာအဲန်၊ ဒေါက်တာဦးကျော်လင်းနှင့် ဆေးတက္ကသိုလ် (၁) မှပါမောက္ခဒေါက်တာ ဂျော့်အိပ်(ချ)စတီးဝပ်တို့က ပို့ချပေးခဲ့ကြပါသည်။
၂၀၁၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ (၂၅) ရက်မှ (၂၇) ရက်အထိ ဘန်ကောက်မြို့တွင်ကျင်းပခဲ့သော တောင်အာရှပညာရေးညီလာခံသို့ ပါဝင်တက်ရောက်ခြင်း။
Open Society Foundation (OSF) မှ ယိုဒယားနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့၊ Anantara Siam ဟော်တယ်တွင် ၂၀၁၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ (၂၅) ရက်မှ (၂၇) ရက်အထိကျင်းပခဲ့သော တောင်အာရှပညာရေးညီလာခံသို့ပါဝင် တက်ရောက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူတိုင်းအကျုံးဝင်ပညာရေးစနစ်အကောင်အထည်ဖေါ်သည့်အခါ ရင်ဆိုင် တွေ့ကြုံရသော စိန်ခေါ်မှုများအား တင်ပြပေးပါရန် ဦးထာအုပ်အားဖိတ်ကြားခဲ့ပါသည်။ ထိုညီလာခံသို့ဦးထာအုပ်မှတက်ရောက် ခဲ့ပြီးပေးထားသောခေါင်းစဉ်ကို ဧဒင်ရိပ်မြုံက ၂၀၁၅ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၁၇ ခုနှစ်တို့တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော သုတေသန တွေ့ရှိချက်များကိုတင်ပြ ဆွေးနွေး ပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ထိုညီလာခံ သို့ အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံပေါင်း (၈) နိုင် ငံမှ ကိုယ်စားလှယ်များတက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
၂၀၁၉ ခုနှစ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမသန်စွမ်းသူများနေ့အခန်းအနားကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၃) ရက်နေ့တွင် ကန်တော်ကြီးပန်းခြံတွင် စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ယခုနှစ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမသန်စွမ်း သူများနေ့အခန်းအနားသည် ရန်ကုန်မြို့ရှိမသန်စွမ်းကျောင်းများမှစုပေါင်းပြီး (၁၅) အကြိမ်မြောက်ကျင်းပခဲ့ ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ လွန်ခဲ့သော (၁၅) နှစ်၊ လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနမှ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမသန်စွမ်းသူများနေ့အခန်း အနားကို ရန်ကုန်မှ နေပြည်တော်သို့နေရာပြောင်းကျင်းခဲ့သည့်နှစ်ကတည်းကစပြီး ယခုလိုကျင်းပလာခဲ့ခြင်းဖြစ် ပါသည်။ ယခုနှစ်အခန်းအနားတွင် လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန၊ မြောက်ပိုင်းခရိုင်မွ ဦးစီးမှူးဖြစ်သူ ဒေါ်် ခ်ိဳခ်ိဳလြင္မှ အဖွင့် မိန့်ခွန်းပြောကြားပြီး၊ စတာဖီး(စ)ကျောင်းမှ ကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီးဒေါ်နီနီ၀င္းမွ နုတ်ခွန်းဆက်စကား ပြောကြားပေးပါသည်။ ကေ်ာင်းအသီးသီးမှ ကျောင်သားများမှပါဝင်သီဆို ဖျော်ဖြေကြပြီး နိုင်ငံကျော်အဆိုတော် များမှလည်း လာရောက်အားပေးသီဆိုပေးခဲ့ကြပါသည်။ အဆိုတော်ကိုဖိုးခွားမှ အားပေးစကားပြောကြားပေးခဲ့ပါ သည်။ ယခုနှစ်အခန်းအနားကို မသန်စွမ်းကလေး၊ မိဘများနှင့် ဖိတ်ကြားထားသောဧည့်သည်ေတာ္များအပါ အဝင် စုစုပေါင်း (၄၄၇) တက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။
ယခုနှစ်အတွက် ကုလသမဂမှချမှတ်ပေးသောဆောင်ပုဒ်မှာ – ၂၀၃၀ ဖွ့ံဖြိုးရေးပန်းတိုင်အစီအစဉ်အကောင် အထည်ဖေါ်ဖို့ မသန်စွမ်းသူများ၏ပါဝင်မှုနှင့်ဦးဆောင်မှုအခန်းကဏ္ဍမြှင့်တင်စို့ ဖြစ်ပါသည်။
၇.၁၂.၂၀၁၉ နှင့် ၈.၁၂.၂၀၁၉ ရက်နေ့ ပဲခူးမြို့ဟံသာ၀တီယူနိုက်တက်ဘောလုံးကွင်းတွင် ကျင်းပပြုလုပ် သောဉာဏ်ရည်မသန်စွမ်းအားကစားဖိတ်ခေါ်ပြိုင်ပွဲကို ဧဒင်မှကလေး(၃၆)ဦးတို့ သွားရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြပါသည်။ မီတာ (၅၀) အပြေးတွင် ပထမဆု (၆) ဦး၊ ဒုတိယဆု (၃) ဦး၊ တတိယဆု (၇) ဦး၊ Bocee ပြိုင်ပွဲတွင် ပထမဆု (၂) ဦး ၊ ဒုတိယဆု (၁) ဦး၊ တတိယဆု (၂) ဦးတို့ အသီးသီးရရှိကြပါသည်။
ယင်းပြိုင်ပွဲသည် Special Olympics Myanmar အဖွဲ့မှဦးစီးကျင်းပခဲ့ပြီး ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး
များမှအားလုံးပေါင်း (၂၂၀) ဦး ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြပါသည်။ ယင်းပြိုင်ပွဲတွင် အားကစားနည်း (၅) မျိုးပြိုင်ခဲ့ပြ ကြပါသည်။
မီတာ (၂၀၀) အပြေးပြိုင်ပွဲ။ ဧဒင်ရိပ်မြုံဝန်ထမ်း၊ မိဘများနှင့် မသန်စွမ်း အားကစားမောင်မယ်များ။
၂၀၁၉ ခုနှစ် ဧဒင်ရိပ်မြုံ၏ ခရစ်စမတ်ဆင်နွဲခြင်း။
ဒီဇင်ဘာလ (၂၀) ရက်နေ့တွင် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဧဒင်ခရစ္စမတ်ပွဲတော်ကို အောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါသည်။ မသန်စွမ်း ကလေးများ၊ မိဘနှင့်မိသားစုဝင်များ၊ လုပ်အားပေးသူများ၊ ဖိတ်ကြားထားသောဧည့်သည်များ စုစုပေါင်း (၄၅၂) ဦးခန့် ပါဝင်ပြီး မနက် ၉း၃၀ မှ ၁၂း၀၀ နာရီအထိ ပျော်ရွင်စွာဆင်နွဲခဲ့ကြပါသည်။ ဆရာစံပီးနှင့် အဖွဲ့မှ ခရစ္စမတ် သီချင်းများသီဆိုပေးကြပြီး ကလေးများနှင့်အတူစုပေါင်းသီဆိုချီးမွမ်းခဲ့ကြပါသည်။ အချင်းချင်းမေတ္တာထားကြ ဖို့၊ ချစ်ကြဖို့ မေတ္တာဖြင့်ဆရာစံပီးမှ တိုက်တွန်းအားပေးခဲ့ပါသည်။
တက်ရောက်လာသူများအား အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲအပြင်၊ ပီဇာများကျွေးမွေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။ မသန်စွမ်းကလေးများအား ပါစတာဘရက္ေခ်ာအပါအဝင် အခြားအလှူရှင်များက ခရစ္စမတ်လက်ဆောင်များပေး ပေးခဲ့ကြပါသည်။ ဤ ခရစ္စမတ်ပွဲကို အားလုံးအတွက်မင်္ဂလာဖြစ်အောင် အဖက်ဖက်မှပါဝင်ပေးကြပါသော ဆရာစံပီးနှင့်အဖွဲ့သားများ၊ လက်ဆောင် ပေး ပေးကြသောအလှူရှင်များအားလုံး ဧဒင်ရိပ်မြုံမှ အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း မှတ်တမ်းတင် ဂုဏ်ပြုအပ်ပါသည်။
ခရစ္စမတ်သီချင်းအတူဆိုနေကြစဉ်။ အဆိုတော်စံပီး၊ ဒေးဗစ်လိုင်နှင့် ကြိုးကြာတို့မှ ဝတ်ပြုချီးမွမ်းသီချင်းဆိုနေကြစဉ်။
ဧည့်သည်များနှင့် စုပေါင်းဓါတ်ပုံ။ ဆရာတော်စံပီးမှ ခရစ္စမတ်တရာဒေသနာဟောပြောပြီး ချီးမွမ်းသီချင်းဆိုနေစဉ်။
မြန်မာအိုင်ဒေါလ်ပြိုင်ပွဲဝင်တစ်ဦးဖြစ်သူ Benjamin Sum မှ လာရောက်လှူဒါန်းခြင်း
၂၀၁၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၂၂) ရက်နေ့ တနင်္လာနေ့တွင် မြန်မာအိုင်ဒေါလ်ပြိုင်ပွဲဝင်တစ်ဦးဖြစ်သူ Benjamin Sum မှ လာရောက်ပြီး မသန်စွမ်းကလေးများအတွက် ခရစ္စမတ်လက်ဆောင်များလာရောက်ပေးသွားခဲ့ပါသည်။ Benjamin Sum နှင့် အဖွဲ့သည် ဧဒင်မသန်စွမ်းသက်ငယ်များပြုစုရာရိပ်မြုံသို့ ၁၂း၃၀ နာရီတွင် ရောက်ရှိလာပြီး မသန်စွမ်းကလေးများအား ခရစ္စမတ်သီချင်းဆိုးပေးခြင်း၊ အားပေးစကားပြောကြားပေးခြင်းနှင့် ခရစ္စမတ်လက် ဆောင်များကို မသန်စွမ်းကလေးများအား ကိုယ်တိုင်လိုက်လံပြီးဝေပေးသည့်အပြင် ဧဒင်မသန်စွမ်းရိပ်မြုံ အတွက်သီးခြား အလှူငွေသုံးသိန်းကိုလည်းလှူဒါန်းသွားခဲ့ပါသည်။
ဤကဲ့သို့ ခရစ္စမတ်ရာသီတွင် လာရောက်ပြီးမသန်စွမ်းကလေးများအားရင်းနှီးစွာနုတ်ဆက်၊ လက်ဆောင်ပေးပြီး သီချင်းများသီဆိုပေးခြင်း၊ အလှူငွေများပေးသွားသော Benjamin Sum အား ဧဒင်ရိပ်မြုံမှ လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲ ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းမှတ်တမ်းတင်ဖေါ်ပြအပ်ပါသည်။ ဧဒင်ရိပ်မြုံမှအနာဂတ်တွင် အောင်မြင်မှုများပို၍ ရရှိနိုင်ရန်အတွက် ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးပါသည္။
ဘင်ဂျမင်ဆွမ်းမှ ကလေးများအားခရစ္စမတ်လက်ဆောင်ပေးပြီး အတူတကွဓါတ်ပုံရိုက်ကူးနေစဉ်။
ဘင်ဂျမင်ဆွမ်းမှခရစ္စမတ်သီချင်းသီဆိုချီးမွမ်းနေစဉ်နှင့် ဧဒင်ရိပ်မြုံမှ ဂုဏ်ပြုလက်မှတ်ပေးနေစဉ်။
ဧဒင်ရိပ်မြုံ၏ ဝန်ထမ်းများအပန်းဖြေခရီးစဉ်ကို ၂၀၂၀ ခုနှစ်သစ် ဇန်နဝါရီလ (၃) ရက်နေ့မှ (၆) ရက်နေ့ အထိ ငပလီကမ်းခြေသို့သွားရောက်ခဲ့ကြပါသည်။ ထိုခရီးစဉ်တွင် ဝန်ထမ်း (၄၁) ဦးနှင့်အတူ မိသားစုဝင် (၈) ဦး စုစုပေါင်း (၄၉) ဦးလိုက်ပါနိုင်ခဲ့ကြပါသည်။ ဤခရီးစဉ်တွင် ဇနီးမောင်နှံ စုံတွဲ (၅) တွဲအပြင် မသန်စွမ်းဝန်ထမ်း (၅) ဦးတို့လည်းပါဝင်ကြပါသည်။ ခရီးစဉ်အတွင်း ဇန်နဝါရီလတွင်မွေးနေ့ကျရောက်သော ဝန်ထမ်း (၃) ဦးတို့၏ မွေးနေ့ကို အတူတကွကျင်းပပေးခဲ့ကြပြီး၊ တစ်နှစ်တာလုံးခွင့်မယူသောဝန်ထမ်း (၃) ဦးကိုလည်း ဆုပေးနိုင်ခဲ့ ကြပါသည်။ ထို့ပြင် မသန်စွမ်းကလေးများအတွက် စေတနာ၊ အနစ်နာခံပြီးလုပ်ဆောင်သောဆုကို ဒေါ်လေး လေးနိုင်အားလည်းကောင်း၊ ကိုယ်ကျိုးစွန့်ပြီးနယ်တစ်ကာသွားရောက်လုပ်ဆောင်သောဆုကို ကိုဌေးအောင် ကိုလည်းကောင်း၊ ခေါင်းဆောင်ကောင်းပီသသောဆုကို နော်ဇာနည်ဆောင်အားလည်းကောင်း ချီးမြှင့်ပေးနိုင်ခဲ့ ကြပါသည်။
မသန်စွမ်းကလေးများအတွက် အကြိုးစားဆုံးဆုရ ဆရာမလေးလေးနိုင်။